JINGHPAW KASA: ပူတာအိုခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပေးသောဆန်အိတ် ကျောက်၊ သဲ၊ ဘိလပ်မြေရောထားခြင်း
ပူတာအိုခရိုင်၊ နောင်ခိုင်ကျေးရွာ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝင်းစစ်ရှောင်စခန်းသို့ ပူတာအိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလှိုင်မျိုး မှပေးပို့သောဆန် အိတ်တွင် ကျောက်ခဲ၊ ဘိလပ်မြေ မှုန့်များ ရောနှောထား၍ စားမရကြောင်းကြားသိရသည်။
ယင်းစစ်ရှောင်စခန်းတွင် အင်ခါးဂါးဒေသမှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ (၆၀) ယောက် ခန့်နေထိုင်ကြပြီး ၃၀.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ခ.ရ.က မှ ဆန်အိတ်တစ်အိတ် လာရောက်ထောက် ပံ့ ပေးကြ ကြောင်း၊ ၄င်းဆန်အိတ်ကို ၁.၁၀.၁၃ ရက်နေ့ ဒုက္ခသည်များအားခွဲ ဝေ ပေးရန်ဖွင့် လိုက်သောအခါ ကျောက်ခဲ၊ သဲ၊ ဘိလပ်မြေမှုန်များမြောက်များစွာ ပါဝင်နေ ကြောင်း တွေ့ရသည်။
Seini Sive said...
When the time comes, God will answer. Everything under the Sun has its appointed time;atime to grow andatime to reap.